ImaritzburgUnited ilangazelele ukuqeda kuTop 8 – Msunduzi News
IMARITZBURG United iqhubekile nokungenzi kahle kuqala le sizini, ngesikhathi ibambana ngelilodwa ngapha nangapha neHighlands Park idlalela ekhaya yabuye yashaywa ngelilodwa eqandeni yiLamontville Golden Arrows ekuhambeni. Lokhu akuhambisani kahle nentshisekelo yeqembu yokuthi iqede ikuTop 8 ngale sizini.
Ngesizini edlule iTeam of Choice yaqeda ilele endaweni ye-15 yaze yaphoqeleka ukuba idlale imidlalo yokuhlunga kulabo abangangena kuPSL. Nokho bakwazi ukuzitholela indawo ku-Absa Premiership yangesizini yowezi-2019/20 emveni kokunqoba yonke imidlalo yokuhlunga ngaphansi kweso lomqeqeshi u-Eric Tinkler. Umqeqeshi wanelisekile ngesimo somqondo nomdlandla okhonjiswa yiqembu emidlalweni yalo yokuqala kwengama-30 yesizini. Yize aphoxeka ukwehlulwa yiArrows, ujabule ngokusebenza jikelele kweqembu.
Ngokwakhe, iqembu lakhe banomfutho owanele ukuba baphokophelele kuTop 8 kule sizini. Uyakholwa wukuthi iqembu lakhe analo kule sizini lingcono kunalangesizini edlule yize elahlekelwe abadlalli ababili abasemqoka basesiswini uFortune Makaringe noSiphesihle Ndlovu abaya kuOrlando Pirates. Uthe, “Uma ngibheka iqembu njengamanje, sesihlanganise abadlali abadala nabasha esibatholile, ngicabanga ukuthi sakhe iqembu elizokwazi ukuhbekana namanye. Uma ngingaliqhathanisa nelangesizini edlule sinabadlali ababili endaweni eyodwa futhi akekho kulabo badlali ongathi uyena ozoqala kwabalishumi nanye. Sakhe ukuncintisana okusemqoka siqhubeka njengoba sifuna ukwenza kangcono kule sizini. Bekusemqoka kakhulu kithina ukuba siqinise iqembu. Ngicabanga ukuthi abadlali esibafakile abasha bazosisiza lapho. Angingabazi sizoncintisana impela nabanye kule sizini. Engikulangazelelayo wukuba sizame siqede sikuTop 8 futhi wonke umqeqeqeshi kuPSL uyakufi sa lokho. Lokho kuyinkololo esemqoka ukuba siphikelele kuTop 8.” UTinkler ubuye wathi: “Uma ngibuka abadlali ebesiveli sinabo nabadlali esibalethile abasha singakwenza lokho.”
IMaritzburg United isayinise uJudas Moseamedi, uPhumlani Ntshangase, uKwanda Mngonyama, uYusuf Jappie, uDaylon Claasen, uThamsanqa Sangweni uGabriel Nyoni ovela eZimbabwe, uDaniel Morgan odabuka eNew Zealand noMicah Lea’alafa oqhamuka eSolomon Islands.
UDaylon Claasen uthe ujabule ukuba yingxenye yeMaritzburg United. Uyayithanda indlela yokudlala kweqembu, kuyahambisana nendlela yakhe yokudlala. Wengeza ngokuthi, “Sinabadlali abaningi abasezingeni eliphezulu futhi ngiyakuthanda okushiwo umqeqeshi kokuthi siphokophelele kuTop 8. Ngale sizini sizoba ngcono kakhulu kunangesizini edlule.” UClaasen ukholelwa wukuthi izikhala ezivuleke ngokuhamba kukaNdlovu noMakaringe zizovaleka. “Sinabadlali abaningi abahle ngisho noma ngingadlali kunabadlali abazodlala kahle. UKeagan (Buchanan) usebuyile ekulimaleni futhi ngiyazi ungumdlali omuhle. Abadlali bayafi ka bahambe, inqobo nje uma laba abakhona besebenza kanzima, ngiyethemba ukuthi konke kozohamba kahle.” Abalandeli nawo wonke umuntu othintekayo umagange ufuna ukubonaukuthi iqembu lizosebenza kanjani kule sizini.
UMsunduzi isithako esimqoka ebholeni lakuleli
Previous post: Iligi kanobhutshuzwayo ivumbulula ikhono eWillowfontein
Next post: Injabulo kunqoba abase-Ethiopia kuMandela Marathon